अमेरिकामा गएर डाक्टरलाई मैले भने कालो प्लाष्टिक सर्जरी गर्दे अनि डाक्टरले सोध्यो किन हजुर ? अनि मैले भने काले दिलवाले हुन्छ नि त ।”(भिडियो हेर्नुस) – Taja Khawar
अमेरिकामा गएर डाक्टरलाई मैले भने कालो प्लाष्टिक सर्जरी गर्दे अनि डाक्टरले सोध्यो किन हजुर ? अनि मैले भने काले दिलवाले हुन्छ नि त ।”(भिडियो हेर्नुस)
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ ०८, २०७८ समय: ११:१५:०७
हेर्दा एकदमै साना तर उनको बोलिमा रहेको छ द”म, रोल्पा घर भएर बसोबास गर्दै आएका सन्त्राज काप्री नाम गरेका एक भाइ जो एकदमै रमाइला अनि गफाडी रहेका छ्न । पछिल्लो समय उनको गफका कारण सामाजिक संजालमा जताततै छाएका उनि । उनको बोल्ने तरिका र बोलेका एकदमै हासउठ्दा कुराले नै उनले सबैको मन जितेका छ्न ।
आज भने उनै भाइ अनतर्बार्ताकै क्रममा मिडियामा आएका छ्न । उनलाइ आफ्नो घर सोध्दादेखि नै उनको कमेडीको सुरुवात भैहाल्यो । आफुलाइ भिटेनको दाइ बताउदै उनले भिटेनको गितको न”क्कल गर्दै आफ्नो घर रौतहट चन्द्रनिगा रहेको उनले बताए । कालो बर्णका उनी मधेसी समुदायका रहेका छ्न र उनले बोलेको नेपाली सुन्दा एकदमै रमाइलो लाग्ने किसिमको रहेको छ ।
ढु”ङ्गा कु”टेर सिलौटा बनाउने काम गर्ने उनको पहिरनले नै थाहा हुन्छ कि उनको परिवारको आर्थिक अबस्था एकदमै क”म”जो”र रहेको छ । तथापी आफु हास्न अनि अरुलाइ हसाउन भने छाड्दैनन उनी । गफैगफमा आफू प्रधानमन्त्री बनेपछी डि एस पि लाई थ”र्का”ए”र भिटेनलाइ जेलबाट निकालेको बताउछ्न उनि ।
आफुले अमेरिका गएर प्लाष्टिक सर्जरी गरेको बताउछ्न उनी । यसो भन्छ्न उनी “डाक्टरलाई मैले भने कालो प्लाष्टिक लगाइदे अनि डाक्टरले सोध्यो किन हजुर ? अनि मैले भने काले दिलवाले हुन्छ ।” हसाएर मार्छन उनले । उनको अनुहार र उनको बोल्ने शैलीले नै सबैलाइ हास्न बा”ध्य बनाउछ । पाच बर्ष अफ्रिका, २ बर्ष अमेरिका, ३ बर्ष मलेसियामा अनि २० बर्ष नेपालमा बसेको गफ पनि लगाए उनले ।
Last Updated on: January 22nd, 2022 at 11:15 am